रामकला खड्का आइतवार, माघ २१, २०७४ 967 पटक पढिएको
आराध्या अधिकारी भर्खर पाँच वर्षकी भइन्। उमेरले सानी भए पनि उनलाई खेल्नका लागि खेलौना होइन आइप्याड नै चाहिन्छ। रविभवनस्थित मदर्स प्राइडमा एलकेजीमा पढ्ने आफ्नी छोरीले बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेल यसैमा झुन्डिएपछि उनका अभिभावक पनि हैरान भइसकेका छन्। पहिले छोरीले पटक्कै खान नमान्ने र चकचक गरेर हैरान पार्ने भएकाले एकैछिन भए पनि आइप्याडमा अल्मलिऊन् भनेर उनलाई यसमा खेल्न दिन थालियो। बिस्तारै आइप्याड नहेरी खाँदै नखाने उनको बानी बस्दै गयो।
छोरीको यो बानी हटाउन उनका बाबा कृष्ण अधिकारीले पनि अनेक उपाय लगाइसके। एक दिन उनले पत्रिका पढेजसो गरी धेरै आइप्याड हेर्ने मानिसको आँखा कुकुरको जस्तो हुन्छ भनेर यहाँ समाचारमा लेखिएको छ छोरी भनेर आराध्यालाई सम्झाउन खोजेछन्। केही दिन त यो उपायले काम पनि गरेछ।
पूरै ध्यान आइप्याडमा हुने भएकाले मुखमा राखेको खाना पनि लामो समयसम्म नचपाई राखिरहने गर्छिन् आराध्या। यसो गर्दा मुखमा इन्फेक्सन भएर ठूलो घाउ हुन्छ भन्दै उनका बाबाले उनलाई धेरै डरलाग्दा तस्बिरहरू पनि देखाइसके। यो उपायले दुईचार दिन काम गरे पनि फेरि उनको दिनचर्या पहिलेकै जस्तै भइहाल्थ्यो। आइप्याडमा पनि ‘ब्याड बेबी’का भिडियोहरू हेर्ने हुनाले यसबाट आँखा हटेपछि भिडियोमै देखाएजस्तो विध्वंश मच्चाउन थालिहाल्छिन् उनी।
अनुज थापा आराध्याभन्दा उमेरमा झन्डै दुई वर्ष साना छन्। तैपनि उनको बानी भने आराध्याको भन्दा रत्तिभर फरक छैन। बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्मै आइप्याडमै झुन्डिने उनको बानी छुटाउन भर्खरै उनलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ। बानेश्वरस्थित मिल्सबेरीमा प्लेग्रुपमा जान थालेदेखि दिउँसोको समयमा भने उनले आइप्याड हेर्न भ्याउँदैनन्। तर, घर आएपछि नसुतुन्जेल उनको हात खाली हुन्न। खाने बेलामा त झन् डाइनिङ टेबुलमा कुनै भाँडाको सहारामा आइप्याड नअड्याएसम्म उनले एक सिता खाना निल्दैनन्।
आइप्याडमा स्पाइडर म्यान, आइरन म्यान, पोकेमन, बेनटेन लगायतका कार्टुन हेरेर हैरान पार्छन् इमाडोलका कृतक केसी। बिदाका दिनमा दिनभरि घर बस्दा बिहानदेखि बेलुकीसम्म यसैमा उनी झुन्डिएको देख्दा सँगै बस्ने मानिसको आँखा पोल्ला तर उनी पटक्कै आँखा झिम्काउँदैनन्। सूर्यविनायकका तीन वर्षीय सम्राट् खड्काको बानी पनि यस्तै छ। घलातेस्थित स्टुडेन्ट एकेडेमीमा पढ्ने उनी उमेरले साना भए पनि बेलाबेलामा आइप्याडमा हेरेका कार्टुनजस्तै नक्कल गर्न खोज्छन्। यो बानी छुटाउन अनेक उपाय लगाउँदा पनि नसकेपछि छोरालाई स्कुल पठाउन थालेपछि अलि कम होला कि भन्ने आशमा छिन् उनकी आमा बिन्दा। पहिले अल्मलाउनका लागि दिने गरेका साधन विस्तारै उनीहरूका लागि घातक होला कि भन्ने डर लाग्न थालिसकेको छ उनलाई।
साना केटाकेटीको तुलनामा अलि हुर्केका बालबालिकाले भने आइप्याडको सदुपयोग पनि गरेको पाइन्छ। चोभारस्थित मोर्डन इन्डियन स्कुलमा कक्षा १० मा पढ्ने आजु महर्जनले यस साधनले आफूलाई गृहकार्य गर्न सजिलो हुनुका साथै पढाइमा पनि सहयोग गरेको बताए। उनी साथीहरूसँग ग्रुप च्याट गरेर कुनै पनि विषयमा छलफल गर्छन्। नबुझेका कुरा अरूलाई सोध्छन् र जानेका कुरा साथीलाई सिकाउने गर्छन्। आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा भएका कुनै व्यक्तिको जीवनी अपर्याप्त भएमा इन्टरनेटमा खोजेर त्यसको विस्तृत अध्ययन पनि उनले गर्ने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ अल्छी लागेको बेलामा भने फिल्म हेर्न र गीतहरू सुन्न मन पराउने उनले सही तरिकाले यो साधनको प्रयोग गरे आफ्नो ज्ञानको दायरालाई बढाउन सकिने अनुभव सुनाए।
पाँच वर्ष मुनिका हुन् या योभन्दा बढी उमेरका बालबालिका, आइप्याडमा लामो समय झुन्डिरहने बानी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुनसक्ने मनोविज्ञ डा. अनिता तामाङले बनाइन्। खानकै लागि आइप्याड नभई नहुने बानीले बालबालिका खानामा रमाउन नसक्ने, त्यहाँ हेर्ने कार्टुनले गर्दा कसैको वास्ता नगर्ने, कार्टुनका पात्रले झैं झगडा गर्ने र आक्रोशित हुने, एकोहोरो हुने लगायतका व्यवहार देखाउने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी ठूला विद्यार्थीलार्ई पनि आइप्याडमार्फत राम्रा सिकाइहरूप्रति अभिप्रेरित गर्न आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई ‘क्वालिटी टाइम’ दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।आइप्याडको लामो समयसम्मको प्रयोगले बालबालिकाको समग्र विकासमा नै असर पुर्‍याउँने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। यसले बालबालिकाको आँखामा असर गर्नुको साथै ढिला निन्द्रा लाग्ने, मोटोपना बढ्ने, कब्जियत हुनेलगायतका समस्या देखा पर्न सक्ने चिकित्सकको भनाई छ।
तीनकुने पुलमा बम आतंक (फोटोफिचर) 2709
दीपक मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन सुरु 5123
समावेशिता : व्यवहारमा कहिले ? 387
स्टेसनरीमा आगलागी,साढे ४२ लाखको क्षति 81
पाँचथरमा एक हजार च्याब्रुङ प्रदर्शन (फोटोफिचर) 91
खेल उद्घाटन गर्ने क्रममा लडेर मेयरको हात भाँचियो 560
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने रञ्जु दर्शनासहित एक दर्जन पक्राउ 512
प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधीवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 934